राजनीतिमा व्यक्तिगत इमान्दारी
शोभाकर पराजुली, प्रकाशित मिति : २०७४ पौष २४ सोमबार , ३,२४३ पटक हेरिएको
काठमाडौं । व्यक्तिगत इमान्दारीको हरेक क्षेत्रमा महत्व छ । राजनीति क्षेत्र भनेको देशरूपी गाडीको जनतारूपी यात्रु लिएको चालक भएको हुनाले इमान्दारीको अझ बढी महत्व छ तर राजनीतिमा इमान्दारहरूको बर्चस्व छ भन्न खोजिएको चाहिँ होइन । व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षामा लिप्त भएर लोकतन्त्र र पार्टीलाई नै बदनाम गराउने राजनीतिज्ञहरूको पनि हाम्रो जस्तो देशमा कमी छैन ।
यस्ता प्रवृत्तिहरू सत्तामा पुगेर प्रशस्त सम्पत्ति कमाउँछन् । फेरी चुनावमा पैसाको माध्यमले जितेर शक्ति प्राप्त गर्दछन् । यो क्रम चलिरहन्छ । सोझा कार्यकर्ताहरू गरीबी, शिक्षा , रोजगारीको कारणले भ्रष्टबाट पाइने सहयोगका आशा भरोसा समेतले गर्दा बाध्य भएर भ्रष्टहरूलाई नै सहयोग गर्न पुग्छन् । उदाहरणको लागि इमान्दार राजनैतिक कार्यकर्ताको पत्नी, पति, बच्चा, विरामी भएमा उनीहरूसँग पैसा हुँदैन । उनीहरू वाध्यतामा हुन्छन् । राजधानीमा बस्ने सत्तामा पुगेका भ्रष्ट नेताले उनीहरूको उपचारमा आर्थिक सहयोग गरिदिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा चुनावमा पैसा बाँडेर पनि भोट लिइन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसले सबै राजनैतिक दलहरूको साख कमजोर हुन्छ र जनताको राजनीतिप्रति नै घृणा पैदा हुन्छ । यो परिस्थितिबाट मुक्ति प्राप्त भएपछि मात्र राजनीतिले समाजमा सम्मान प्राप्त गर्छ र समाजलाई दिनुपर्ने कुरा दिन सक्छ ।
नेपालका भव्य भवन बनाउने, महँगा गाडीमा चढ्ने, बच्चाबच्चीलाई विदेश पढ्न पठाउने तथा लवाई र साँझको खुवाईबाट नै प्रष्ट रूपमा उनीहरूको पुरानो हैसियत र वर्तमान हैसियत फरक देखिएका नेताहरू त्यो श्रेणीमा पर्छन् । सांसद र मन्त्री हुँदैमा स्वभाविक आम्दानीबाट अकूत धन कमाउन सकिने भए कतिपय मन्त्री तथा सांसद भएकाहरूले पछि सानो रेष्टुरेन्ट, पत्रिका पसल आदि खोलेर बस्ने थिएनन् । जनताले र इमान्दार कार्यकर्ताहरूले यसको मूल्यांकन गर्नैपर्छ । बेइमानलाई पछाडि पार्नैपर्छ । इमान्दारहरू सधैभरी बेइमानीको पछि लाग्नु बेइमानलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तर विकल्प नभएपछि के गर्ने ? अब विकल्प खोज्नुपर्छ । सम्भावित केही विकल्पहरूलाई निम्नानुसार सूचिकृत गर्न सकिन्छ :
– इमान्दार नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नै क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा सामुदायिक आधारमा फाइदा नलिने गरी बोर्डिङ्ग विद्यालयहरू चलाउने व्यवस्था गर्नपर्छ । यसले साह्रै संवेदनशील क्षेत्र बच्चा बच्चीको पढाई सम्बन्धी समस्या र बाध्यतालाई हल गर्छ ।
– राजनीतिसँगै वैकल्पिक पेशा चाहे त्यो बोर्डिङ्ग शिक्षक होस् वा अरु नै होस् गर्नुपर्छ ।
– अर्को महत्वपूर्ण कुरा कमसेकम हरेक जिल्लामा राजनीतिज्ञहरूलाई माँया र सम्मान गर्ने चिकित्साकर्मीहरूलाई निश्चित समय दिन अनुरोध गरेर सामाजिक मुनाफारहित स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी अप्ठेराहरूबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
– यस्तै कार्यहरू गरेर आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई पनि सहयोग गर्दै राजनीतिमा हुनुपर्ने इमान्दारीको उदारहरण बनेर काम गर्दा भ्रष्टहरूको चंगुलमा बाध्यतावश लाग्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइन्छ ।
– आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर, पर्न सक्ने अप्ठ्याराहरूका लागि पूर्व तयारी, बच्चाबच्चीहरूको शिक्षाको उचित व्यवस्था र इमान्दारीपूर्वक जनतासँग हेलमेल भएपछि इमान्दारहरूले बाध्यतावश भ्रष्टहरूको पछि लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि चुनावमा भ्रष्टलाई टिकट थुपारिएमा कार्यकर्ता र जनताले विद्रोह गर्छन् नै र इमान्दार नेताहरू सच्चाईका लागि विद्रोहीलाई साथ दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । महामानव बी.पी. कोइरालाले नेपाली भूमिमा आधार नभएका सुकिला कपडा लगाउने भुईफुट्टा वर्गको विरुद्धमा इमान्दार लोकतन्त्रवादी कार्यकर्ताले संघर्ष र विद्रोह गर्नुपर्छ भन्नुभएको आसय त्यही नै हो । विद्रोह र संघर्ष व्यक्तिगत फाइदाको लागि सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर कहिल्यै गर्नुहुँदैन तर राजनीतिलाई पवित्र बनाउन र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नलिइकन गरिन्छ भने त्यो महानता हो । इमान्दारहरू संगठित नभएसम्म अनुशासित भएका कारणले भ्रष्टहरूको आज्ञा मान्नु बाध्यता जस्तो देखिएला तर समय आउँदा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ । छलफल गरेर निष्कर्ष निकाली त्यसलाई लागू गर्नु अझ उपयुक्त हुनेछ ।
बेइमानी ठूला नेताले गर्ने, मतदाताका आक्रोश र विद्रोहको पीडा ग्रामीण एवं जिल्ला स्तरका नेता तथा कार्यकर्ताले खप्नुपर्ने कुरा अवश्य पनि राम्रो होइन ।
राजनीतिमा यिनै कारणले गर्दा नेता र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध परिभाषित हुनुपर्ने देखिन थालेको छ । नेताहरूको आदेश कार्यकर्ताहरूले मान्नैपर्छ तर त्यो आदेश पार्टीको नीति र जनताको हितसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ । यदि त्यसो भएन भने पार्टी र जनताविरोधी नेताको भनाई कार्यकर्ताले मान्न सक्दैनन् र मान्न हुँदैन पनि । कार्यकर्ताले नेतालाई मान्नुपर्ने कारण नेताको इमान्दारी नै हो । त्यो नभएमा कार्यकर्ताको बाध्यता हट्छ । कार्यकर्ताहरू स्वाभिमानी भै दृढ बन्न सकेमा नेता पनि सही निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन् । अझ भन्ने हो भने अन्य पार्टीका असल व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने र आफ्नै पार्टीका गलतहरूको आलोचना गर्ने क्षमताको विकासले पार्टी पार्टी बीच पनि इमान्दारीको संचार हुन थाल्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा पार्टी मात्र इमान्दार भएर हुँदैन । सबै पार्टीमा इमान्दारी हुनुपर्छ । किनभने मूलभूत रूपमा बहुदलीय व्यवस्थामा अर्को राजनैतिक दललाई सहयोगी सचेतकको र सच्चा सल्लाहकारको रूपमा हेर्ने आँखा विकसित गरिनुपर्छ ।
नेपालको वर्तमान परिवेशमा सिद्धान्तको महानता भन्दा राजनीतिलाई समग्र भ्रष्टाचारबाट माथि उकास्न आवश्यक भएको छ । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरिनु आवश्यक भएको छ । सबै प्रकारका सरकारी र सार्वजनिक क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी बनाउने र सर्वदलीय संयन्त्रलाई त्यस्ता कार्यको अनुगमन गर्ने अधिकार समेत दिन आवश्यक समेत भैसकेको छ । बाध्य भएर भन्नैपर्छ– नेपालमा संभवतः भ्रष्टहरूको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय साँठगाँठ भएको महसुस हुन्छ ।
एमाले-माओवादी एकता: बैशाख ९ गतेको लगन सर्‍यो, नयाँ साईतको खोजी
राजनीतिक विचारका आधारमा विभेद हुन्न : मन्त्री महासेठ
राष्ट्रपतिलाई आफ्नो साख नगुमाउन कांग्रेसले आग्रह गर्ने
बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष सकियो
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि सर्वदलीय बैठक बालुवाटारमा जारी
राजनीति विकासका लागि गर्नुपर्छः नेता लेखक
सहमतिमा आउन मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह
नेपाली राजनीति विचारविहीन हुँदैछ, थ्रेसहोल्ड त्यसकै नमूना हो – नारायणमान विजुक्छे